Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada Ogadeniya ee Magaalada London oo Canbaareysay dhaqan xumada gumeysiga Ethiopia
Jaaliyada Ogadeniya ee Magaalada London oo Canbaareysay dhaqan xumada gumeysiga Ethiopia
24/11/2012 cambaareyn ay jaliyada magaalada London ee wadanka UK usoo jeedineyso shirkii waxshinimada ahaa ee ay Gumeysiga iyo Gacanyarahiisu (Cabdi UBBO) ku qabteen magaalada iigjiga.
Sida aan lawada socono waxaa dhawaanahan ninka gacanyaraha uga ah gumeysiga Ethiopia Ogadenia iyo Kaaliyayaashiisu ay sameynayeen waxyaabo aan hada kahor ka dhicin dhulka Sogmalida Ogadenia iyo Somaliweyn oo ka soo horjeeda dhaqanka diinta Islaamka iyo anshaha suuban lidna ku ah xuquuqda aadamaha ah taas oo lagula ka cayay bulshada qaybaheeda kala duwan.
Waxay deganada sida degmoyinka iyo magaloyinka waa way nee Ogadenia ay si qasab ah ooga soo uruuriyeen dad shacab ah kuwaas oo ay ku jiraan Maxaabiis intii xabsiga laga soo saaray si qasab ah loogu sheegay in ay qoral ka akhriyaan shirka hortiisa hadana lagu celiyay waxaa dadkaas ka mid ahaa Odayaasha dhaqanka, Culimo, haween, iyo qayba kale oo bulshada ka tirsan oo si bini aadnimadaiyo dhaqankaba suuban ee islaamka ka baxsan wax ayna arag maqala hada kahor wax sheegaya intii loo soo akhriyay lagu qasbay In camerada horteeda ay ka akhriyaan.
Waxaan la soconaa in dadkii sida qasabka ah la’isugu keenay in qaarkood jidhdil loo gaystay ay u geeriyoodeen intii shirku sheegu socday, waa caado iyo dhaqan uu gumeysigu leeyahay in mar walba uu ku guul dareysto goobaha dagaalada iyo siyaasadiisa caalamka inuu isku dayo in ay ku cadho baaba’aan dadka shacabka ah si ay isugu dayaan in ay muuiyaan in ay wali nool yihiin ooy wax xukumaan.
Ma’aha markii oogu horeysay ee ay Gumeysiga iyo gacanyarayaashiisu sameeyaan shirarkan oo kale waana mid ay isku dayayaan in ay ku khaldaan ra’yiga Somalida.
Jaliyada Somalida Ogadenia ee magaalada London waxay si kulul u cambaaraynaysaa waxyaabaha shirkaas lagu qabtay magaalada Jigjiga iyo waxyaabihii dhaqanka iyo Diintaba ka baxsanaa ee lagula kacay Shacabka aan waxba galabsan ee meesha sida qasabka ah la’isugu keenay.
Kusimaha Jaliyada London